Kadib Digniintii Cuslayd Ee Uu Zidane U Diray Florentino Perez, Maxay Yihiin Arimaha Suuqa Ee Zidane Ku Qasbi Kara In Uu Markale Iscasilo. - Gool24.Net
Dhawr bilood oo kaliya ayaa ka soo wareegtay markii uu Florentino Perez si lama filaan ah samata bixin uga dalbaday Zinedine Zidane ee uu Santiago Bernabeu ku soo celiyay.
Laakiin haddaba waxaa soo ifbaxaya khilaaf la sheegay in uu u dhexeeyo Zidane iyo madax waynaha kooxdiisa Madrid ee Florentino Perez iyo go’aan qaadashada kooxda kowaad.
Zinedine Zidane ayaa si cad saxaafada u mariyay hadal digniin wayn u muuqday kaas oo uu si aan gabasho lahayn ugu sheegay in uu kooxda ka bixi doono haddii aanu go’aanadiisa isagu qaadanayn.
Ka hor kulanka xidhitaanka horyaalka La Liga ee Real Madrid ayuu Zidane digniin adag u jeediyay maamulka kooxdiisa si loo siiyo xoriyad uu go’aanadiisa ku gaadhi karo.
Zidane oo digniin layaableh u jeedinayay maamulkiisa Madrid ayaa yidhi: “Aniga ayaa tababaraha ah isla markana aniga ayaa go’aamadayda samayn doona, haddii kale anigu waan baxayaa”.
Zidane oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi: “Waxaan tixraacayaa xulshada kooxda ee waxyaabaha la xidhiidha suuqa kala iibsiga- waxaa jira dad kale oo ka shaqeeya, si wada jir ah ayaanu u samaynaa”.
Florentino Perez ayaan wali u muuqan mid Zidane ku ixtiraamaya in uu qaato go’aanada uu kooxda dib ugu dhisayo waxaana jira khilaaf ka dhashay heshiiska uu Zidane ku doonayo Pual Pogba iyo arinta wiilkiisa Luca Zidane.
Wararka ayaa sheegaya in Zidane iyo Perez ay isku khilaafsan yihiin heshiiska qaaliga ah ee Pual Pogba iyada oo Zidane uu doonayo in Pogba laga soo bixiyo 160 ka milyan gini ay Man United ku qiimaynayso.
Laakiin Perez ayaa doonaya in ay la soo saxiixdaan xidiga Tottenham ee Christian Eriksen kaas oo hal sano oo kaliya heshiiskiisa ka hadhay isla markaana qiimo ahaan aad uga hoosayn kara Pual Pogba.
Zidane ayaa la sheegay in uu aqbalay in maamulka kooxdiisa Madrid ay Thibaut Courtois u doorteen goolhayaha kowaad isla markaana ay meesha ka saarayaan Keylor Navas oo uu doonayay in uu kooxda sii joogo.
Laakiin Madrid ayaa doonaysa in Andriy Lunin uu noqdo goolhayaha labaad halka Zidane uu u arko in wiilkiisa Luca Zidane oo waqtigiisa oo dhan Madrid ku soo qaatay ay tahay in uu booska labaad ku jiro.
Zidane iyo boodhka Madrid ayaa isku khilaafsan arimo ay tahay in go’aan laga gaadho oo ay ka mid yihiin qorshaha suuqa kala iibsiga taas oo hadda uu Zidane saxaafada ka hor sheegay in uu xataa kooxda ka bixi karo.
Real Madrid ayaa xili ciyaareedkan koob la’aanku dhamaysatay wuxuuna Zidane doonayaa in uu soo dhiso koox uu Barcelona ugula tartami karo koobka horyaalka La liga maadaama oo uu ahmiyada kowaad ka dhigay horyaalka La liga.
Real Madrid ayaa lala xidhiidhinayaa Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy iyo xidigo badan oo kale balse waxaa la sugyaa haddii uu Zidane heli doono taageerada dhaqaale ee uu Perez uga baahan yahay si uu kooxda xoojin ugu sameeyo.
Real Madrid ayaa muddo sanad ka yar shaqada kooxdeeda ka caydhisay Solari iyo Lopetegui oo ahaa labadii tababare ee Zidane shaqada uga danbeeyay balse xoriyad la’aanta shaqada tababaranimo ee Madrid ayaa u muuqata in ay markale Zidane go’aan adag ku qasbi karto.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka uu Zidane saxaafada mariyay ayaa ah mid muujinaya in aanu wali haysan waxyaabihii uu kooxdiisa ka doonayay gaar ahaan go’aanada uu doonayo in uu qaato.